ခါးပိုက်နှိုက် – Eleven Media Group
ယခုလက်ရှိအသုံးပြုနေသည့် ဖုန်းနှင့်ပါဆိုလျှင် ကျွန်တော်ကိုင်တွယ်၊ အသုံးပြုခဲ့သည့် ဖုန်းအရေအတွက်မှာ သုံးလုံးတိတိရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ပထမဦးဆုံး ကိုင်တွယ်ခဲ့သည့် ဖုန်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံလုပ် ခလုတ်ဖုန်းအမျိုး အစားဖြစ်ပြီး အသုံးပြုများခြင်းကြောင့် ပျက်သွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုဖုန်းလေးနောက် ဒုတိယကိုင်တွယ်ခဲ့သည့် ဖုန်းမှာ Huawei တံဆိပ်နှင့် Touch Screen အမျိုးအစား ဖုန်းလေးဖြစ်ပြီး အလုပ်ပြန်ချိန်တစ်ခုတွင် ကားပေါ်၌ ခါးပိုက်နှိုက်ခံလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အတန်တန်သတိထား ဂရုစိုက်နေသည့်ကြားမှပင် ခါးပိုက်နှိုက်ခံထိသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အမှန်အတိုင်း ၀န်ခံရလျှင် ထိုဖုန်းကလေး ခါးပိုက်နှိုက်ခံရခြင်းအတွက် များစွာပင် စိတ်မကောင်း ဒေါသဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရခြင်းမှာ ချွေးနှဲစာလေးကို ကျားကုတ်ကျားခဲ စုဆောင်းပြီးမှ ၀ယ်ယူနိုင်ခဲ့သည့် ဖုန်းကလေးဖြစ်နေသောကြောင့်ဖြစ်ပြီး ဒေါသဖြစ်ရခြင်းကတော့ ဖုန်းကတ်ပြန်လည် လျှောက်ထားရခြင်းကဲ့သို့ အလုပ်မျိုးကို ပြန်လည်လုပ်လိုက်ရခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
တကယ်တော့ ကျွန်တော့်ဘ၀တွင် ထိုတစ်ကြိမ်အပြင် နောက်ထပ်နှစ်ကြိမ်တိတိ ခါးပိုက်နှိုက်ခံခဲ့ရဖူးပြီး တစ်ကြိမ်တွင် ခါးပိုက်နှိုက်ကို လက်ပူးလက်ကြပ်ပင် ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါ သည်။ မှတ်မှတ်ရရ ထိုတစ်ကြိမ်မှာ ဒိုင်နာ အမျိုးအစား ၅၁ နံပါတ်လိုင်းကားပေါ်တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ (YBS စနစ် မဖြစ်မီ ဟိုးယခင်က ဖြစ်ပါသည်။) ခါးပိုက်နှိုက်သူမှာ အသက် ၄၀ ကျော်အရွယ် သန့်ပြန့်သည့် ရုပ်ရည်ဖြင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနေ့က ကျွန်တော်သည် ပိုက်ဆံထည့်ရန် အိတ်ကပ်ပါသည့် အင်္ကျီကို ၀တ်ဆင်ထားခဲ့ပါသည်။ တကယ်တော့ ကျွန်တော့်မှာရှိသည့် အင်္ကျီအများစုမှာ ထိုအင်္ကျီကဲ့သို့ ပိုက်ဆံ၊ ဘောပင်တို့လို အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများထည့်ရန် အိတ်ကပ်ပါသည့် အင်္ကျီများသာ ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မဖြစ်မနေ ဆောင်ယူရမည့် အခါမျိုးမှလွဲလျှင် ပိုက်ဆံအိတ်ကိုင်ရန် ၀ါသနာမရှိသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ထိုနေ့ကလည်း ပိုက်ဆံတို့ကို အင်္ကျီအိတ်ကပ်သို့သာ ထည့်၍ယူဆောင်သွားခဲ့ပါသည်။ ထိုအမျိုးသမီးသည် လမ်းမှတ်တိုင် တစ်ခုဆီမှ တက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်၏ နံဘေးတွင် နေရာရခဲ့ပါသည်။ ထိုအမျိုးသမီး၏ လက်ထဲတွင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်အချို့ ထည့်ထားခဲ့သည့် ဆွဲခြင်းတောင်းတစ်လုံးကို ကိုင်ထားခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့သတိထားမိခြင်းမှာလည်း ထိုအမျိုးသမီးကြီး ကျွန်တော်၏ နံဘေးတွင် ထိုင်ရန်နေရာမရမီ ထိုအမျိုးသမီး၏ လက်ထဲတွင် ကိုင်ထားသည့် ဆွဲခြင်းတောင်းကို ကူကိုင်ပေးရန် စဉ်းစားမိခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါသော်လည်း ထိုအမျိုးသမီးကြီးမှာ ကျွန်တော်၏နံဘေးတွင် ထိုင်စရာ တစ်နေရာရရှိသွားသောကြောင့် မကိုင်ပေး ဖြစ်ခဲ့တော့ပါ။
ထိုအမျိုးသမီးသည် ထိုင်စရာနေရာရသည်နှင့် ဆွဲခြင်းတောင်းကို ပေါင်ပေါ်တင်ကာ ဆွဲခြင်းတောင်း၏ ကိုင်းများပေါ်တွင် လက်နှစ်ဖက်ကို ယှက်တင်၍ထိုင်ပါသည်။ အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရလျှင် ထိုအချိန်အထိ ထိုအမျိုးသမီး၏ အပြုအမူပေါ်ကျွန်တော် အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ပင် ရှိခဲ့ပါသေးသည်။ သို့ပါသော်လည်းများ မကြာမီအချိန်များမှာတော့ ထိုအမျိုးသမီးကြီးအပေါ်ကျွန်တော် သင်္ကာမကင်း ဖြစ်လာခဲ့မိပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုအမျိုးသမီးကြီး၏ ဆွဲခြင်းတောင်း ကိုင်းပေါ်ယှက်တင်ထားခဲ့သည့် လက်များထဲမှ တစ်ဖက်သည် ကျွန်တော့်၏ အိတ်ကပ်အပေါ်သို့ မကြာခဏ ဝေ့၀ဲရောက်ရှိလာကြောင်း သတိထားလိုက်မိသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် မှတ်တိုင်တစ်ခုသို့ရောက်၍ ဘရိတ်တစ်ခါ အုပ်လိုက်တိုင်း ထိုအမျိုးသမီး၏ လက်ချောင်းကလေးများက ကျွန်တော်၏ အိတ်ကပ်ထဲမှ ပိုက်ဆံတို့ကို နှိုက်ယူရန် ကြိုးစားနေကြောင်းကို မှေးမှိတ်ချင်ယောင်ဆောင်ထားသည့် မျက်လုံးများဖြင့် ကျွန်တော် သေချာစွာပင် မြင်တွေ့လိုက်ရသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ တကယ်လည်း ကျွန်တော် မသင်္ကာမိသည့်အတိုင်း ထိုနေ့က ကျွန်တော်၏ အိတ်ကပ်ထဲမှ ပိုက်ဆံတို့ကို နှိုက်ယူလိုက်စဉ် လက်ပူးလက်ကြပ်ပင် ဖမ်းမိခဲ့ပါသည်။ သို့ပါသော်လည်း အမျိုးသမီးဖြစ်နေသည်ကတစ်ကြောင်း အလုပ်မရှုပ်လိုသည်ကတစ်ကြောင်း သနားစဖွယ်ကောင်းအောင် တောင်းပန်သည်က တစ်ကြောင်းတို့ကြောင့် နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် မလုပ်ရန် သတိပေးပြီး ကားပေါ်ကနေ ဆင်းခိုင်းလိုက်သည်မှအပ မည်သည့်အရေးယူမူကိုမှ မပြုလုပ်လိုက်မိပါ။
နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ကတော့ အလုပ်ပြန်ချိန် ကားပေါ်တွင် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုတစ်ကြိမ်မှာတော့ ဘယ်သူက ဘယ်အချိန်မှာ နှိုက်လိုက်မှန်းပင် မသိရဘဲ အနှိုက်ခံလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပိုက်ဆံအချို့၊ မှတ်ပုံတင်နှင့် မင်မိုရီစတစ်တစ်ခု ပါသွားခဲ့ပါသည်။ ခါးပိုက်အနှိုက်ခံလိုက်ရခြင်းကိုပင် ကားပေါ်ကနေ ဆင်းပြီးကာမှ သိခွင့်ရလိုက်ရပါသည်။ တကယ်တော့ တစ်ကြိမ်မဟုတ် နှစ်ကြိမ်မက သုံးကြိမ်တိတိ ခါးပိုက်အနှိုက်ခံရခြင်းသည် ကျွန်တော်၏ ပေါ့ဆမှု၊ နမော်နမဲ့နိုင်မှုများကြောင့်လည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည် ထင်ပါသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ခရီးသွားသည့်အခါ အလုပ်သွား အလုပ်ပြန် ကားကျပ်ကျပ်ကို တိုးဝှေ့စီးနင်းကြရသည့် အခါမျိုးများတွင် မိမိတို့၏ ပိုက်ဆံအိတ်များ၊ လက်ဝတ်လက်စားများကို အထူးဂရုတစိုက် ထိန်းသိမ်းသင့်သည်ဟု ထင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် မိမိတို့၏ လက်ကိုင်ဖုန်းများကို ပိုမိုကာ ဂရုတစိုက် ထိန်းသိမ်းသင့်သည်ဟု ထင်မြင်မိပါသည်။ တကယ်လည်း ယခုနောက်ပိုင်းတွင် ငွေကြေးပိုက်ဆံထက် ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ရယူနိုင်သည့် ဖုန်းများကို ဦးတည်နှိုက်ယူလာကြသည်ကို ကြားသိမြင်တွေ့လာခဲ့ရပါသည်။
ခါးပိုက်နှိုက်ယူရုံတင်မက ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ဖုန်းလုပြေးခြင်း၊ အုပ်စုဖွဲ့၍လုယက်ခြင်း၊ ဖုန်း ဆိုင်များကိုမှ ရွေးချယ်ဖောက်ထွင်းခိုးယူခြင်းကဲ့သို့ ကိစ္စများကိုလည်း ပြုလုပ်လာနေကြပြီ ဖြစ်ပါသည်။ တကယ်တော့ ကလေးကအစ လူကြီးအဆုံး လူတိုင်းနီးပါး ဖုန်းများကို ကိုင်တွယ်အသုံးပြုနေကြသည့် ခေတ်ကြီးထဲတွင် ခါးပိုက်နှိုက်သူ လုယက်သူတို့ကဲ့သို့ အကြမ်းဖက်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ ကျွန်တော်တို့ထံပါးမှ အချိန်နှင့်ငွေတို့ကို တိတ်တဆိတ် တတိတိ နှိုက်ယူစားသုံးပစ်နေသည့် အရာတစ်ခုလည်း ရှိနေခဲ့ပါသေးသည်။ ဟုတ်ပါသည်။ ထိုအရာမှာ ကျွန်တော်တို့ တန်ဖိုးကြီးကြီးပေးဝယ်ကာ ကိုင်တွယ်နေကြသည့် ဖုန်းများပင် ဖြစ်ပါသည်။ တကယ်လည်း ကျွန်တော်တို့သည် နေ့စဉ် Facebook အသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့ ကိစ္စမျိုး၊ ဂိမ်းဆော့ခြင်း ဗီဒီယိုကြည့်ခြင်းကဲ့သို့ ကိစ္စမျိုးများဖြင့် အချိန်များကို ကုန်မှန်းမသိ ကုန်လွန်နေခဲ့ကြရပါသည်။ ငွေများ ကုန်မှန်းမသိ ကုန်နေခဲ့ကြရပါသည်။ အချို့သူများဆိုပါလျှင် လစဉ်ဖုန်းဆက်ခြင်း အင်တာနက်သုံးခြင်း များအတွက် ကုန်ကျမှုမှာ သိန်းဂဏန်းအထက်မှာပင် ရှိနေခဲ့ပါသည်။ ယုတ်စွအဆုံး စည်းကမ်းနှင့် သုံးပါသည်ဆိုသည့်သူများပင် အနည်းဆုံး ဖုန်းနှင့်ပတ်သက်၍ထွက်သွားသည့် ငွေကြေးပမာဏမှာ လစဉ်သောင်း ဂဏန်းအထက်မှာ ရှိနေခဲ့ပါသည်။
ထို့အပြင် ဖုန်းကို နေ့ရော ညပါ မျက်နှာနှင့် မခွာစတမ်း အသုံးပြုမှုကြောင့် မျက်လုံးနှင့်ပတ်သက်သည့် ရောဂါများ၊ ဦးနှောက်၊ အာရုံကြောနှင့် ပတ်သက်သည့်ရောဂါများလည်း ဖြစ်ပွားနိုင်သေးပါသည်။၂၀၁၆ ခုနှစ် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ လေ့လာမှုစစ်တမ်းတစ်ခုအရ စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူကလေးများသည် စမတ်ဖုန်းအသုံးမပြုသူ ကလေးများထက် မျက်စိစွေစောင်းသည့်ရောဂါကို ပိုမိုကာ ခံစားရနိုင်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ထို့အပြင် တယ်လီဖုန်းဖြင့် စာရိုက်ရခြင်းကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်အနေအထား မမှန်ခြင်း ဇက်နာခြင်း ဇက်ကြောထိုးခြင်းကဲ့သို့ ဝေဒနာများကို ခံစားရနိုင်သည်ဟူလည်း ဆိုကြပါသေးသည်။
ထိုမျှမက ဝေါစထရိဂျာနယ် ရုံးခန်းတွင်းရှိ ဖုန်းရှစ်လုံးတွင် ရောဂါပိုးမွှားမည်မျှ ပါဝင်သည်ကို စမ်းသပ်မှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး စစ်ဆေးခဲ့သည့် ဖုန်းအလုံးတိုင်းတွင် မစင်မှတစ်ဆင့် ပါဝင်သော ပိုးမွှားများ ပါဝင်နေကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ၎င်းဖုန်းများတွင် ကပ်နေသည့် ရောဂါပိုးမွှားပမာဏသည် အိမ်သာကမုတ်ရှိ ရောဂါပိုးမွှားပမာဏထက် ပိုမိုများပြားကြောင်း တွေ့ရှိရသည်ဟုလည်း ဆိုထားပါသေးသည်။ ထို့အပြင် နားကြပ်တပ်၍ နားထောင်ခြင်းကြောင့် အာရုံကြောများကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်ဟူ၍လည်း ဆိုကြပါသေးသည်။
လေ့လာမှုများအရ အမေရိကန်နိုင်ငံသား အသက် ၂၀ ကျော်အရွယ်များအနက် ရာခိုင်နှုန်း ၃၀ သည် ကြိမ်နှုန်းမြင့်အကြား အာရုံအနည်းငယ် ချွတ်ယွင်းနေကြသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ထို့အပြင် လမ်းလျှောက်ရင်း ဖုန်းအသုံးပြုခြင်းကြောင့် ဆေးရုံရောက်ရသူ မနည်းတော့ကြောင်း အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ် တက္ကသိုလ်၏ လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် ဖော်ပြထားပြီး ယင်းကဲ့သို့ မတော်တဆဖြစ်သူများတွင် ၁၆ နှစ်မှ ၂၅ နှစ်ကြားလူငယ်များ အများဆုံးဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ထို့အတူပင် စမတ်ဖုန်းများကြောင့် ချစ်သူခင်သူများနှင့် အချိန်မဆိုင်း ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်သော်လည်း စမတ်ဖုန်းကြောင့်ပင် ဆက်ဆံရေးပျက်မှုများ ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်သည်ဟုလည်း ဆိုပါသည်။ စာရိုက်ပြီး တောင်းပန်သည့်အမျိုးသမီးများ၊ စာရိုက်ပြီး ပြဿနာဖြေရှင်းသည့် အမျိုးသမီးများသည် ခိုင်မြဲသော ဆက်ဆံရေးမရရှိနိုင်ကြောင်း ဘရစ်ဟမ်ယန်းတက္ကသိုလ်မှ သုတေသနပညာရှင်များက ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ထိုမျှမက တယ်လီဖုန်းများကြောင့် အိပ်ချိန်များကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သေးသည်ဟု ဆိုပြန်ပါသည်။
တကယ်လည်း အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၄၄ နှစ်အရွယ်များ၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် ဖုန်းကို လက်တစ်ကမ်း အကွာထား၍ အိပ်စက်တတ်ကြပြီး လက်ပ်တော့များနှင့် စမတ်ဖုန်းများမှ ထုတ်လွှတ်သောရောင်ခြည်ပြာသည် အိပ်စက်ခြင်းအပေါ် ဆိုးရွားစွာ အကျိုးသက်ရောက်နေကြောင်းကိုတော့ သိသူရှားပါးလှသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ထို့အပြင်ဖုန်းများမှ ထုတ်လွှတ်သည့် အလင်းရောင်အတုကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်သည် နွမ်းနယ်လာပြီး အိပ်ချင်စိတ်ပေါက်စေသည့် ဓာတုပစ္စည်းများကို မထုတ်လုပ်နိုင်တော့ဘဲ လူမှာ ပိုပြီးတက်ကြွသလို ခံစားရကြောင်း ဟက်ဖင်တန်ပို့စ်က ဖော်ပြခဲ့ဖူးပါသည်။
ကနေဒါနိုင်ငံက၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေသော ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဂျာနယ်၌ အသက်ကိုးနှစ်မှ ၁၁ နှစ်အရွယ်ရှိ ကလေးများသည် အိပ်ရာထဲသို့ စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်နှင့် လက်ပ်တော့ပ်တစ်ခုခုကို ယူသွားလေ့ရှိကြခြင်းကြောင့် ၎င်းတို့အတွက် အအိပ်ပျက်ခြင်းနှင့် ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ထို့အပြင် အိပ်ရေးပျက်ခြင်းကြောင့် ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုကိုပါ အဟန့်အတား ဖြစ်စေနိုင်သည့်အပြင် ဆယ်ကျော်သက်များနှင့် လူလတ်ပိုင်းအရွယ်များအတွက် အသက်အရွယ် ကြီးပြင်းလာသောအခါ ဦးနှောက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းချက်များခံစားရသည့် အန္တရာယ်ရှိကြောင်း ပညာရှင်တို့က သတိပေးထားခဲ့ကြပါသေးသည်။ ထိုမျှမက တစ်နေ့ကို စမတ်ဖုန်း ၆၈ မိနစ်ခန့် သုံးစွဲခြင်းသည် စိတ်ဖိ စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်ပြီး ၁၇ မိနစ်ထက် မကျော်အောင် သုံးမှသာလျှင် ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်လိမ့်မည်ဟု ဆိုပါသည်။
ထို့အပြင် စိတ်ဖိစီးမှု အများဆုံးသူများ၏ စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုပုံများကို ထပ်မံလေ့လာခဲ့သည့်အခါ ထိုစိတ်ဖိစီးမှုများသူတို့သည် အင်တာနက်သုံးခြင်းနှင့် ဂိမ်းကစားခြင်းတို့ကို ဖုန်းပြောခြင်းထက် ပိုမိုအသုံးပြုကြပြီး သူတို့၏ အဓိက စိတ်ဖိစီးရသည့် အကြောင်းရင်းကတော့ သူတို့သည် အပြင်မထွက်ဘဲ တစ်နေရာတည်း၌သာ ဖုန်းအသုံးပြုနေခြင်းကြောင့် တက်ကြွမှု မရှိတော့ဘဲ စိတ်ဖိစီးရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သုတေသီများက ရှင်းပြခဲ့ကြပြီး ထိုလေ့လာမှုကို Medical Internet Research ဟူသည့် ဂျာနယ်၌ ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ကျွန်တော်တို့၏ အိတ်ကပ်အတွင်းမှ ပိုက်ဆံတို့ကို နှိုက်ယူလာမည့် ခါးပိုက်နှိုက်တို့အန္တရာယ်ကို သတိထားကာကွယ်ရန် လိုအပ်သကဲ့သို့ ကျွန်တော်တို့၏ အိတ်ထောင့်အတွင်း၌နေ၍ ကျွန်တော်တို့၏၀င်ငွေ၊ အချိန်နှင့် ကျန်းမာရေး၊ လူမူရေးတို့ကို တတိတိ နှိုက်ယူစားသုံးနေသည့် အနီးကပ်ဆုံး ခါးပိုက်နှိုက် သို့မဟုတ် အိမ်တွင်းသူခိုးတို့၏ အန္တရာယ်ကို သတိထားကာကွယ်ရန် လိုအပ်နေခဲ့ပြီဟူ၍လည်း ထင်မြင်နေခဲ့မိပါသည်။
Posted in FeaturesTagged ခါးပိုက်နှိုက်LeaveaComment on ခါးပိုက်နှိုက်
Posted in Crime, NewsTagged ခါးပိုက်နှိုက်LeaveaComment on YBS ယာဉ်ပေါ်တွင် ခရီးသည်ထံမှ ပိုက်ဆံအိတ် နှိုက်ယူခဲ့သည့် ခါးပိုက်နှိုက် နှစ်ဦးအား ဖမ်းဆီးရမိ
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၌ YBS ယာဉ်ပေါ်တွင် စီးနင်းလိုက်ပါလာသည့် ခရီးသည် အမျိုးသမီးထံမှ ပိုက်ဆံအိတ်နှိုက်ယူပြီး ၀ိုင်းဝန်းထိုးကြိတ်သည့် ခါးပိုက်နှိုက်အဖွဲ့အား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီခန့်က လှည်းကူးမြို့နယ် သနပ်ပြင်ကျေးရွာနေ မ…. သည် YBS အမှတ်(၁) ယာဉ်လိုင်းမှ ယာဉ်တစ်စီးဖြင့် ရန်ကုန်မြို့တွင်းဘက်သို့ စီးနင်းလိုက်ပါလာစဉ် တောင်ဒဂုံမြို့နယ် နတ်စင်မှတ်တိုင်အရောက်၌ ၎င်း၏ ပိုက်ဆံအိတ်ကို ယာဉ်ပေါ်ရှိ အမျိုးသားတစ်ဦးက နှိုက်ယူသွားသည်ကို တွေ့ရှိရသဖြင့် ယင်းပိုက်ဆံအိတ်ကို ပြန်ပေးရန် ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းသို့ပြောဆိုစဉ် အဆိုပါအမျိုးသားက မ…. ၏ ဦးခေါင်းကို လက်သီးဖြင့်ထုပြီး ဆဲဆိုကာ တံတွေးဖြင့်ထွေးခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်းနှင့်အတူပါလာသည့် အခြားအမျိုးသား နှစ်ဦးကလည်း မ….အား ၀ိုင်းဝန်းဆဲဆိုပြီး လက်ကို လိမ်ချိုးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ ပြုလုပ်နေသဖြင့် ယာဉ်ပေါ်တွင် လိုက်ပါလာသည့် အမျိုးသားတစ်ဦးက ၀င်ရောက်ဖျန်ဖြေစဉ် ယင်းအမျိုးသားကိုလည်း ၎င်းတို့က ဆဲဆိုပြီး တံတွေးဖြင့်ထွေးခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယာဉ်ပေါ်တွင် ထိုသို့ဖြစ်ပွားနေသဖြင့် ယာဉ်မောင်းဖြစ်သူက နီးစပ်ရာ တောင်ဒဂုံမြို့မရဲစခန်းသို့ ယာဉ်အားမောင်းသွားခဲ့ကြောင်း၊ ထို့နောက် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ကျူးလွန်သူများအား ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာ ၎င်းတို့မှာ အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်နေ နေဖုန်းအောင်(ခ)ဟိန်းဇော်ဦး (၃၁နှစ်)၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်နေ ထက်အောင်(၃၆နှစ်)နှင့် ဖြိုးဝေထွန်း(ခ) ဖြိုးကြီး (၂၃နှစ်) ဆိုသူတို့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ခါးပိုက်နှိုက်တာကို အမျိုးသမီးက မြင်သွားတော့ ဆဲဆိုပြီး အမျိုးသမီးကို ထိုးကြိတ်တယ်။ ပြီးတော့ တံတွေးနဲ့ထွေးတယ်လို့ သိရတယ်။ ဘေးက၀င်ပြောတဲ့ လူတစ်ယောက်ကိုလည်း တံတွေးနဲ့ထွေးတယ်လို့ သိရတယ်။ အခုသူတို့သုံးယောက်ကို စခန်းမှာ ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။ ဒီနေ့ရမန်ယူတယ်” ဟု အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ အရာရှိတစ်ဦးက ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်တွင် ပြောကြားသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်မှ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူသုံးဦးကို တောင်ဒဂုံမြို့မရဲစခန်းက (ပ)၂၈၇/ ၂၀၁၈၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၈၂/၃၅၄/၂၉၄/၁၁၄ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားပြီး ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
Posted in Crime, NewsTagged ခါးပိုက်နှိုက်LeaveaComment on YBS ယာဉ်ပေါ်တွင် ခရီးသည်အမျိုးသမီးထံမှ ပိုက်ဆံအိတ်ကို နှိုက်ယူပြီး ၀ိုင်းဝန်းထိုးကြိတ်သည့် ခါးပိုက်နှိုက်အဖွဲ့အား ဖမ်းဆီးရမိ